Pwint Thit Tin Maw, Author at Chelmo News Portal
Author: Pwint Thit Tin Maw
Home›Author: Pwint Thit Tin Maw
Pwint Thit Tin Maw
နောက်ပိုင်းထွက်ရှိလာတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကတော့ ဇာတ်လမ်းတွေကောင်းသထက်ကောင်းလာနေပါပြီ။ ကဲ…….. အားလုံးစောင့်မျှော်လို့ရမယ့် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ဆိုတာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် Flower of Evil အပိုင်း ၁၆ ပိုင်းပါဝင်မယ့် Flower of Evil ဇာတ်လမ်းကို July 29 ရက်နေ့မှာ tvN က စတင်ထုတ်လွှင့်မှာ ဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ...
Good Data Corporation က အပတ်စဉ်တိုင်း ထုတ်ပြန်လေ့ရှိတဲ့ ကိုရီးယား ပရိသတ်တွေကြား July လပထမအပတ်မှာ ရေပန်းအစားဆုံး ကိုရီးယား drama serie စာရင်း ထွက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီ စာရင်းဟာ ကိုရီးယား ပရိသတ်တွေပေးထားတဲ့ reaction တွေအားလုံးကို စုစည်းရေတွက်ပြီး တွက်ရှိလာတဲ့ စာရင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ...
လူတိုင်းကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ပြဿနာကတော့ ကိုယ့်မျက်နှာ အရေပြားအမျိုးအစားကို မသိပဲ မှားယွင်းစွာ skin care တွေ အသုံးပြုမိနေကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ကိုယ့်အရေပြားက ဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါလဲဆိုတာ သိနိုင်အောင် အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ အချက်တွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်………. ပထမဆုံး မိတ်ကပ်တွေကို စင်ကြယ်အောင် ဖျက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ မျက်နှာသစ်ဆေး ...
ပျိုမေတို့လက်တစ်ကမ်းမှာပဲရှိနေတဲ့ ရေခဲတုံးက ဘယ်လိုတွေအသုံးဝင်လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင် မျက်ကွင်းညိုတာကို လျော့ချပေးပါတယ်။ မျက်ကွင်းနားတစ်ဝိုက်ကို ရေခဲတုံးနဲ့ ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးခြင်းဖြင့် မျက်ကွင်းညိုတာကို သက်သာစေပါတယ်။ ဝက်ခြံတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းအောင် တွန်းထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်းနေတဲ့ ဝက်ခြံပေါ်ကို ရေခဲတုံးနဲ့ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင် ကပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဝက်ခြံအဖုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ ချွေးပေါက်တွေကျဉ်းအောင်လည်းကူညီပေးပါတယ်။ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကို ရေခဲတုံးနဲ့ ညင်သာစွာ ...
မျက်နှာကို စနစ်တကျ သန့်စင် ဆေးကြောပါ ဝက်ခြံကင်းစင်ဖို့ ပထမ အရေးကြီးဆုံး အချက်က မျက်နှာမှာ ရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ အဆီတွေ အညစ်အကြေးတွေ ရှင်းလင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် သစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံပေါက်တဲ့ အသားအရေတွေအတွက် မျက်နှာသစ်ဆေးကို ဓာတု ပစ္စည်းတွေ မပါဝင်တဲ့ ဆပ်ပြာ အပျော့စား ...
မေလမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသမယ့် ကိုရီးယား drama series များ
Soul Mechanic မေလ ၆ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး နဲ့ ကြာသပတေး နေ့တွေမှာ KBS2 မှထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ် Medical drama အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အဓိက သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ Shin Ha-kyun နဲ့ Jung So-min တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် Oh ...
၁။ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ရတဲ့ အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ပါတစ်ခါတလေ ဘာမှန်းမသိပဲ စိတ်အခြေအနေ ကျဆင်းနေသလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့အခါဆိုရင် အားအင်သုံးပြီး လုပ်ရမယ့် အိမ်မှုကိစ္စတစ်ခုခု ထလုပ်လိုက်ပါ။ ဥပမာ မီးဖိုချောင် ကြမ်းပြင်တွေ ရေဆေးပစ်တာမျိုး အားနဲ့အင်နဲ့ လုပ်ရတာတစ်ခုခုကို တကယ် စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ အဲ့လို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ ပျော်ရွှင်သွားတာ ...
Convid 19 ကြောင့် နိုင်ငံတကာက နာမည်ကြီး နေရာအချို့ရဲ့ အရင်နဲ့ အခု ကွာခြားသွားတဲ့ ပုံရိပ်များ
၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ မှ The Kaaba, Islam’s holiest shrine, at the Grand Mosque of Mecca ပုံရိပ် ၂၀၂၀ မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှ The Kaaba ပုံရိပ် St. Peter’s ...
1. Blackpink’s Lisa 2. Mario Maurer 3. Aum Patchrapa 4. Bright 5. Dj Push Puttichai 6. Mike Angelo 7. Mai Davika 8. Yaya Urassaya 9. Nadech ...
တစ်ချို့သော သူတွေက သူတို့ မနေ့က လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်တွေးပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်ရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ လှောင်ပိတ်ထားကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို သူတို့ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထဲကနေ မေ့ပျောက်သွားဖို့မတတ်စွမ်းနိုင်ခြင်း ကလည်း သူတို့ကို အမြဲတမ်း စိတ်သောက ရောက်နေစေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်၊ အမှားတွေနဲ့ ပြဿနာတွေ အပေါ် ...